hataru/हटारु: September 2012
शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहेको माओवादी सेनाका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन लगभग टुंगोमा पुगेको छ ।
अधिकृत मुनिकै सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १ हजार ३ सय ८४ लडाकुले नेपाली सेनाको चलानीपत्र बुझिसकेका छन्, जो आगामी मंसिरदेखि सेनाले तोकेका विभिन्न ७ वटा तालिम केन्द्रमा उपस्थित हुनेछन् ।
अधिकृत तहको परीक्षामा सहभागी ७५ जनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा छ । करिव ५ वर्ष लामो संख्या विवादपछि २०६८ कात्तिक १५ गते शान्ति प्रक्रिया लगायत विभिन्न विषयमा प्रमुख दलहरूबीच साँतबुदे सहमति भएको थियो ।
Posted by Nabin Bibhas at 11:51 PM 1 comment:
संसारको सबैभन्दा सरल काम
एक मिनेट मौन धारण गर्नु हो
सभा, सेमिनार या पोलिट्ब्युरोहरुमा
या राष्ट्रिय दिवसमा
सहिदहरुको श्रद्धाञ्जलीमा मौनधारण गरिरहेछन् ।
Posted by Nabin Bibhas at 3:09 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 12:52 AM No comments:
करिमा बेगमको अन्तर्वार्ता लिन जाँदै छु भन्दा कतिपय साथीले हो र भन्दै जिब्रो टोके । कतिपय रमाइलो मानेर हाँसे । आखिर यो देशको मन्त्री भइसकेको महिला, तपाईंको नाम सुनेर कोही डराउँछन्, कोही हाँस्छन् । किन यस्तो इमेज छ तपाईंको ?
हिन्दीमा एउटा भनाइ छ- राम तेरी गंगा मैली हो गई पापीओँके पाप धोतेधोते । समाजमा पुरुषहरू अत्याचारी छन्, तिनीहरूको पाप धुँदाधुँदा हामीजस्ता महिला आफैँ मैला भएका छौँ । पुरुषप्रधान समाजमा कि चुप लागेर बस्नुपर्‍यो, बोल्दा 'चलित्रहीन' भइन्छ । तर, म खुलस्त बोल्छु । काम पनि सीधा गर्छु ।
विनोद मेहता भारतका चर्चित पत्रकार हुन् । डेबोनेयर पत्रिकाबाट सम्पादन सुरु गरेका मेहताले आधा दर्जनभन्दा धेरै पत्रिकामा सम्पादकको रूपमा काम गरे । पछिल्लो समय उनले सम्पादन गरेको आउटलुक पनि सफल पत्रिका मानिन्छ । विशेषगरी पत्रिकाको लेआउट, फरक विषय र विवादास्पद लेख छापेर उनले भारतीय पत्रिकारिताकोे इतिहासमा नयाँ आयाम ल्याइदिए । त्यस्तै, विभिन्न पत्रिकामा स्कुपका कारण उनी जति चर्चामा रहे, त्यति नै विभिन्न मिडियाबाट हटाइएका कारण पनि । लखनउमा हुर्केका विनोदको पछिल्लो आत्मकथा लखनउ ब्वाई पनि चर्चामा छ ।
Posted by Nabin Bibhas at 12:07 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 1:16 AM2comments:
भावी प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कांग्रेसको किचलोबारे सहरमा एउटा ठट्टा छ । ठट्टा भन्छ, तीन शीर्षले एक-अर्काको भाषा बुझ्दैनन् । शेरबहादुर देउवाले बोलेको सुशील कोइराला बुझ्दैनन्, सुशीलले बोलेको शेरबहादुरले । अनि, यी दुवैले बोलेको रामचन्द्र पौडेलले बुझ्दैनन् र रामचन्द्रको यी दुईले । भाषामै समस्या भएपछि संवाद कसरी हुन्छ र संवाद नै नभएपछि सहमति कसरी बन्छ ?
मोहभंग हुँदै गएको समाजमा वास्तविकताभन्दा ठट्टा बलिया हुन्छन् । नेपाल त्यसै पनि दिग्भ्रमित देश हो । माओवादीलाई भोट हाल्छ, साइबाबाको पूर्णकदको फोटोबाट कहिले विभूति र्झछ भनेर प्रतीक्षा गर्छ, हरेक वर्ष नबिराई अमेरिकाको डिभी चिट्ठा भर्छ । साइबाबा, माओवादी वा डिभीमध्ये भविष्यचाहिँ के हो भन्नेमा नेपाल अझै 'अध्ययन-अनुसन्धान'मै छ । दलहरू गोलचक्करमा फसे भनेर चित्त दुखाउनु बेकार छ । नेपाल जस्तो छ, नेता त्यस्तै छन् ।
काठमाडौ, आश्विन ६ -
समायोजनका लागि चालू पूर्वलडाकुहरूको परीक्षाअन्तर्गत अधिकृत तहको लिखित परीक्षामा पूर्वडिभिजन कमान्डर यामबहादुर अधिकारीसहित ७५ जना उत्तीर्ण भएका छन् । लिखित परीक्षा ८५ जनाले दिएका थिए । लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुनेमा पूर्वसहायक डिभिजन कमान्डरहरू वासुदेव घिमिरे, पदमबहादुर तामाङ र वीरेन्द्र बुढा पनि छन् । अधिकारीलाई समायोजनमा पूर्वलडाकुहरूको नेतृत्व गर्दै कर्णेल तहको नियुक्ति दिने समझदारी बनिसकेको छ ।
अधिकृत तहको अन्तिम नतिजा यही असोज २१ प्रकाशित गर्ने औपचारिक तालिकामा उल्लेख भए पनि दोस्रो हप्ताभित्रैमा नतिजा निकाल्ने तयारी भइरहेको उच्चस्रोतले जनाएको छ । यसैगरी अधिकृतमुनिका तहका परीक्षाअन्तर्गत शनिबार प्रकाशित स्वास्थ्य परीक्षण नतिजामा १ हजार ४ सय २ जना पूर्वलडाकु उत्तीर्ण भएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा ४२ जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । अधिकृतमुनिकाको अन्तिम नतिजा आइतबार साँझ प्रकाशित हुने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
Posted by Nabin Bibhas at 12:03 AM No comments:
तस्बिरः विमल खतिवडा/ईकान्तिपुर
रत्ननगर (चितवन), आश्विन ६ - दुःख गरे के हुँदैन र भन्ने भनाइलाई यहाँकी ग्रामीण क्षेत्रकी एक महिलाले चरितार्थ गरेकी छिन् । कक्षा ५ पनि नपढेकी ती महिलाले उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गरेपछि यो भनाइ चरितार्थ भएको हो ।
चितवनको विकट शक्तिखोर गाविस–८ देवीटारकी बाख्रापालक महिलालाई ७० हजारको पुरस्कार पाउँदा आफू छाँगाबाट खसेजस्तो लाग्यो । “मलाई छाँगाबाट खसेजस्तो भयो, विश्वासै लागेन”, उनले भनिन् ।
गाउँकी महिला भए पनि समाज परिवर्तन र आयआर्जनका कार्यक्रममा सक्रिय भएकाले त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै स्थानीय महिला छमीकुमारी मगरलाई रु. ७० हजार नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो ।
बाह्रौँ हेफर दिवसको अवसरमा चितवनको शक्तिखोरमा भएको पुरस्कार वितरण समारोहमा यस वर्ष स्वर्णिम प्रतिभा पुरस्कार (करिब एक हजारको अमेरिकी डलर) बाट मगरलाई सम्मान गरिएको हेफरका क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक डा. पीताम्बर कुसवाहले जानकारी दिनुभयो ।
Posted by Nabin Bibhas at 7:17 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 11:05 PM No comments:
Three-parent baby' fertility technique mulled in Britain
LONDON, Sept 17: A fertility technique that uses DNA from three parents to create an embryo could become legal in Britain afterapublic consultation on its ethical implications was launched on Monday.
The results of the consultation will help informadecision by the government on whether to legalize the technique as early as next year -- potentially making Britain the first country in the world to hold human trials into the treatment, the Daily Telegraph reported.
The IVF-based technique is designed to avoid serious mitochondrial diseases inherited on the maternal side, such as muscular dystrophy, by replacing some of the mitochondrial DNA with healthy DNA from the so-called "third parent".
Posted by Nabin Bibhas at 1:04 AM5comments:
पछिल्लो समय मायाप्रेम नेपाली समाजमा पनि पच्न थालेको हो कि भन्ने लाग्छ । प्रेमविवाह गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेकाले पनि यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । केही पहिलेसम्म भने प्रेमविवाह गर्नु फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुन्थ्यो । तर, पनि त्यही समय एमालेका प्रायः नेताले प्रेमविवाह गरे । त्यो पनि पार्टीको स्वीकृति लिएर ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रेमविवाह २००७ सालपछि नै सुरु भएको देखिन्छ । संस्कृति र समाजसँगै जोडिएको विषय हो प्रेमविवाह पनि । यसका अतिरिक्त राजनीतिक-आर्थिक विकासको अवस्थासँग पनि प्रेमविवाह जोडिएको छ । आजभन्दा केही समयअघि पनि प्रेमविवाह गर्न समाजमा धेरै ठूलो विद्रोेह गर्नुपथ्र्यो । ००७ सालपछि कानुनी रूपले प्रेमविवाह गर्ने बाटो त खुल्यो तर सामाजिक अड्चन भने कायम नै थियो ।
Posted by Nabin Bibhas at 9:01 AM No comments:
लटपुलटमय राजनीतिक इतिहासका साक्षी बनेका गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको बुधबार निधन भयो । केही महिनाअघि मात्रै गणतन्त्र संस्थागत भएको देख्ने धोको भएको आशय व्यत्तल गरेका सिंहले अब त्यो देख्न पाएनन् । जुन चाहना राखेका थिए ।
गणतन्त्रवादी नेता भनेर चिनिने सिंहको विषयमा कमैलाई जानकारी भएको अर्को पहिचान के हो भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अगुवा चे ग्वेभारासँग उनले भेटेका थिए । वर्मास्थित एक गोप्य स्थानमा जम्मा पाँच मिनेटको संवादको अनुभव उनीसँग थियो ।
चे ग्वेभारालाई भेट्ने एक मात्र नेपाली थिए, रामराजाप्रसाद सिंह । बर्माको एक गोप्य स्थानमा चे ग्वेभारासित भएको भेटपछि आफूमा गणतन्त्रप्रति थप ऊर्जा थपिएको नेता सिंहले नै खुलासा गरेका थिए ।
गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा नौ वर्षकै कलिलो उमेरमा नेता सिंह आफ्नो भाइ लक्ष्मणप्रसाद सिंह र बुबा जयमंगल सिंहसँगै जेल परेका थिए । जेलजीवनपश्चात्को भारत बसाइ, भारतका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन, भारतकै बसाइका क्रममा इन्दिरा गान्धीसँगको भेट, क्रान्तिकारी क्लाराको सहयोगमा चे ग्वेभारासँगको भेट अविस्मरणीय रहेको नेता सिंहले बताएका थिए ।
Posted by Nabin Bibhas at 8:58 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 8:55 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 8:49 AM No comments:
Posted by Nabin Bibhas at 3:41 AM No comments:
अभिनेत्री रेखा थापा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग डेटिङ जान इच्छुक
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई निकै बौद्धिक हुनुहुन्छ, उहाँसँग डेटिङ जाने मौका मिले को नजाला ? म उहाँसँग डेटिङ जान इच्छुक छु ।
गिरिजाप्रसाद र सेतो मोही
०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुरसन्धि गरेर आए । तर, उनले देशलाई भने, 'सन्धि होइन, सहमति भएको हो ।' गिरिजाप्रसादले टनकपुर बेचे भनेर एमालेलगायत हामी वाम दल आन्दोलनमा गयौँ । त्यहीवेला टनकपुर सन्धि हो कि सम्झौता हो भनेर प्रस्ट पार्न सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । सर्वोच्चले प्रस्ट भनिदियो, 'टनकपुरसन्धि हो, सहमति भनेर देशलाई ढाँट्न पाइदैँन ।'
Posted by Nabin Bibhas at 2:54 AM3comments: